Irhafu yezinto ezithunyelwayo ezithunyelwa ngaphandle zaseRussia ziya kunyusa amaxesha ama-2,5-China Foshan Hermes Steel
Irhafu yezinto ezithunyelwa ngaphandle eRashiya iyakonyusa amaxesha ama-2.5
I-Russia inyuse irhafu yayo yokuthumela ngaphandle kwi-scrap steel ngama-2.5 amaxesha. Amanyathelo ezemali aya kuqala ukusukela ekupheleni kukaJanuwari isithuba seenyanga ezi-6. Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo amaxabiso ezinto ezikhoyo ngoku, ukunyuka kweerhafu akuyi kukhokelela ekuphelisweni okupheleleyo kwezinto ezithunyelwa ngaphandle, kodwa ubukhulu becala, kuya kukhokelela ekwehleni kwinzuzo yokuthengisa ngaphandle. Elona xabiso liphantsi lokuthumela ngaphandle li-euro ezingama-45 / ngetoni endaweni ye-5% yangoku (malunga ne-18 yeetoni / itoni ngokusekwe kumaxabiso entengiso ehlabathi).
Ngokwengxelo zamajelo eendaba, ukonyuka kweerhafu kuzakubangela ukwehla okukhulu kwimida yentengiso yabathumeli ngaphandle, ngelixa iindleko zabathengisi ziya kunyuka phantse amaxesha e-1.5. Kwangelo xesha, ngenxa yenqanaba eliphezulu leekowuteshini zamazwe aphesheya, kulindeleke ukuba isixa sesinyithi esilahliweyo esithunyelwe kwiimarike zangaphandle asizokwehla ngokukhawuleza emva kokuba kuqale imithetho emitsha (ubuncinci ngoFebruwari). “Ingxaki yokubonelela ngezinto eziphathekayo inkulu kakhulu kwimarike yentsimbi ezilahliweyo. I-Turkey inokujamelana nokunqongophala kwezinto zokwenza izinto ngoFebruwari. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ukuphunyezwa kwale rhafu, ngakumbi kwimeko yokunqongophala kwezinto, akuyi kuyikhuphela ngaphandle iRussia njengomthengisi. Ngaphandle koko. Oku kuzakubanzima kurhwebo lwaseTurkey, utshilo umrhwebi waseTurkey kudliwanondlebe namajelo eendaba.
Kwangelo xesha, okoko abathathi-nxaxheba kwimakethi yokuthumela ngaphandle ngaphandle kwamathandabuzo malunga nokuphunyezwa kweerhafu ezintsha, ukuphela konyaka, ixabiso lentengo lezibuko liyakumiswa kwi-25,000-26,300 engange / ngetoni (338-356 yeedola zaseMelika / itoni) Amachweba e-CPT, anokuvumela ukuthengisa okunenzuzo. , Kunye nokunyusa irhafu.